Ny endriny voalohany sy ny endriny rindrina ao amin'ny trano iray dia mora, raha mampiasa tapakila maoderina miaraka amin'ny vokatry 3d. Vao haingana, ity fitaovana ity dia toa hita ho an'ny tarika ihany, nampiasaina ho an'ny elitika ihany izy io. Soa ihany, ny fandrosoana dia tsy mitsahatra mivoatra ary ny teknolojia vaovao rehetra dia mivoatra ho an'ny vahoaka.
Fonon-kira vita amin'ny fluorescent misy vokany 3D
Io fandrakofam-baovao io dia azo antoka fa tafiditra amin'ny fivoaran-draharaha farany, saingy na dia tao anatin'ny fotoana fohy aza dia efa nahavita nahazo laza izy. Mba hahazoana sary telo dia tsy maintsy mamafa ny hazavana ianao ary mametaka ny jiro BLB. Amin'ny ankapobeny, misy jiro toy izany dia apetraka eo amin'ny valindrihana ary vokatr'izany dia azo atao ny manangona sary iray mitambatra.
Ny lamaody 3D wallpaper dia misy fahasamihafana maromaro avy amin'ny analogie mahazatra ahitana sary telo. Voalohany indrindra, mora amin'ny lakaoly izy ireo, eny fa na dia tsy misy aza ny valim-bavak'ireo olana, ary azo atao mora foana ny lakana amin'ny takariva iray tsy misy fahasarotana.
Amin'ny tombontsoa hafa azo avy amin'ny rakitra fluorescent misy vokatra 3D, dia afaka manamarika ireto manaraka ireto isika:
Noho ny karazana loko sy loko isan-karazany, ary koa ny loko manokana, ny rakitra toy izany dia azo soratana mora foana amin'ny karazan'akanjo rehetra;
Ny fahazoana ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra fanta-daza iray, afaka mamela amim-pahadisoana ny taratasy fanamarinana kalitao sy ny fehin-draharaha ara-pahasalamana: ny matematika dia azo antoka tanteraka ho an'ny fahasalaman'ny olombelona ary tsy miteraka alika;
Raha ilaina dia azonao atao ny manadio ny rindrin'ny vovoka na vovoka amin'ny fanadiovana mahazatra;
Ny sary mihetsika 3D dia hamela anao farafahakeliny dimy taona, satria vita amin'ny fitaovana manokana tsy misy mpanohitra.
Tapakelin'ny 3d ho an'ny sary hosodoko
Karazana fanoratana iray vaovao hafa - Tapakila misy lanjany lehibe ho an'ny hosodoko. Inona no rakotra an-tselatra toy izany: amin'ny fototry ny endrika tsy misy lamba vita amin'ny sarisary antsoina hoe granulata, izay lasa be volom-bolo taorian'ny fampiharana ny loko.
Ny fampiasana lamba dia tsy ampiasaina afa-tsy rano hosodoko. Ity dia vahaolana tena tsara ho an'ny rindrina misy tsy fetezana lehibe, izay sarotra ny mametraka azy. Ankoatra izany, safidy raha toa ka mihodina ny rindrina ao an-tranonao: noho ny tsy misy lamba mainty sy ny loko, dia hamaha tanteraka ny olana amin'ny famaranana ny rindrina ao an-trano ianao.
Tapakila 3D ho an'ny rindrina: ho an'ny efitrano tsirairay ny famolavolana azy manokana
Ny sary volometika dia matetika ampiasaina amin'ny fidirana ao anaty efitrano. Tsara ny manamarika fa ity karazana rindrina ity dia ampiasaina amin'ny efitrano malalaka. Raha tsy izany, tsy afaka mahita ny fiantraikany 3D fotsiny ianao.
Tapakila 3d ho an'ny trano fandroana dia tsy vitan'ny hoe manome ny hevitra momba ny mpanamboatra sy mamorona ny fananganana "velona", fa koa misy fiantraikany amin'ny toetran'ny olona iray. Amin'ny alalan'ny sary 3D, dia azonao atao ny manasaraka ny faritra fihinanana avy amin'ny faritra sakafo. Ankoatra izany, amin'ny fisafidianana ny loko sy ny haben'ny sary, dia mety tsara ny fanamafisana ny halavany sy ny geometry ao amin'ilay efitrano. Noho ny antony mazava, ny fiakarana dia tokony ho mafy orina tsara, azo akana ary indrindra amin'ny vina-vinyl. Avy eo dia manindrona tavy raha tsy hampatahotra ny hafa.
Raha ny sary avy amin'ny rindrina 3D ho an'ny rindrina dia misy fomba roa ampiasaina eto. Na mameno ny atin'ny trano miaraka amin'ny sary manjavozavo ny foto-pisakafoanana, mba hahatonga ny sakafo ho mahafinaritra kokoa. Na, ampiasain'izy ireo ny lohahevitra momba ny zavamaniry mifanaraka amin'ny endriky ny lakozia.
Tapakila 3D ho an'ny efitrano fandriana dia miorina eo amin'ny lohan'ilay fandriana na eo amin'ny rindrina mifanohitra amin'ny fidirana. Jereo tsara eo afovoan'ny efitranon'ny efitrano 3d eo amin'ny vala. Ireo dia mety ho sary avy amin'ny lanitra manga, zavamaniry na ny lanitra feno kintana. Sary mampiavaka ny ranomasina sy ny fasika, ny fisarahana amin'ny fasika na sary fotsiny.
Ny wallpaper 3d ao amin'ny efitranon'ny ankizy dia voafidy matetika avy amin'ny andian-tsary misy ny lanitra, voninkazo na zavatra izay mahazatra ilay zaza. Azonao atao ny mampiasa ny loko 3d miaraka amin'ny sarin'ny biby na vorona. Azonao atao ny mahita tapakila 3D ao anaty efitrano misy sarin'angona maro na mamorona efitrano an-kalamanjana mifanaraka amin'ny tiany.
Loko misy lakaoly ho an'ny valindrihana
Trano roa tsara tarehy
Fitaovana amin'ny solaitrabe amin'ny tanan'ny tanana
Krôlojera amin'ny fomba maoderina
Ahoana no hametrahana varavarankely?
Sary an-tsary ny orkide
Ahoana no hifidianana garderne?
Ny fampifangaroana loko ao anatiny - ireo fitsipika fototra
Ny jiro eo amin'ny lakozia
Famolavolana ny verandah ao amin'ny tranon'olon-tsotra
Karazan'akanjo ho an'ny vehivavy
Ny Mozean'i Eureka
Sakafo Waffle amin'ny henam-pako
Cystoma amin'ny ovain'ny zo - antony
Ahoana no ahitan'ny daty?
Nahoana ny zaza no manasokajy ny vavony?
Sage ho an'ny fahatanorana
Lehilahy Tiger sy Tiger vavy - Fifandraisana
Progesterone tsy fahampiana - soritr'aretina
Gwyneth Paltrow sy Chris Martin dia nanao fangatahana fisaraham-panambadiana
Angina amin'ny zaza - soritr'aretina sy fitsaboana aretina isan-karazany
Blake Live nankalaza ny faha-30 taonany tamin'i Anna Kendrick sy ireo namany hafa
Duck vita amin'ny buckwheat
Sinusitis - fitsaboana ny fitsaboana amin'ny olona ao an-trano
Vitsy kely ny ronono